Xildhibaano naftooda u baqay oo hoteeladii ay degenaayeen ku laabtay – Madal Furan
Hoy > Warka > Xildhibaano naftooda u baqay oo hoteeladii ay degenaayeen ku laabtay
Xildhibaano naftooda u baqay oo hoteeladii ay degenaayeen ku laabtay
Muqdisho (Madal Furan) – Xildhibaano badan ayaa dib uga laabtay barta kulanka Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii lagu amray in la baaro, taasoo Dastuurka Soomaaliya Xildhibaanadda u ogolaanayo in aan la baari karin krokooda iyo guryahooda.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in Xildhibaanadan ay dib ugu laabteen Hoteeladii ay degenaayeen kadib markii ay soo food saartay cabsi ah in gudaha baarlamaanka ay kala kulmi karaan weerar gacan ka hadal ah oo dhex mara Xildhibaanadda iska soo horjeeda.
Waxaa ilaa iminka ka jira gudaha hoolka shirka ee Baarlamaanka muran iyo qaylo sababtay inay lunto kala danbeyntii iyo sharcigii golaha lagu hogaamin jiray.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad Mudane Muudeey oo ah ninka ay sida weyn isu hayaan Guddoomiye Jawaari ayaa saaka isu diyaariyey inuu noqdo shir gudoomiye balse, waxaa Kursigii shir gudoonka ku fariistay Guddoomiye Jawaari oo iska caabinaya in lagu socodsiiyo mooshinka xilka looga qaadayo.
La Soco Madal Fuan.com
Ciidamada Badda Iiraan oo sheegay inay fashiliyeen weerar Burcad Badeed Soomaaliyeed ku qaadeen Markab xamuul.
Puntland oo dalbatay in laga qaybgeliyo shirks ay dowlad Soomaaliya la yeelaneyso Somaliland
Kooxdii fulisay weerarkii Nairobi oo la ogaaday inay dhamaantood Kenya u dhasheen.